Somali | Hiv idag
Cudurka Hivku sidii shalayto ma aha
KU SOO DHAWOOW MEESHA HIVIDAG.SE
Inuu qofku isagoo qabo cudurka hivka ku noolaado wadanka Iswiidhan aad ayay uga macno duwan tahay sidii shalayto la sameeyey ama ay ahayd. Waddanka Iswiidhan daawaynta cudurka hivku wuxuu noqday wax ku ool oo hoos ayuu uga dhacay heerkii uu joogay ilaa uu gaaray eber oo markaa in cudurka uu qofku u sii gudbiyo qofkale ama uu qof kale ku daarto aad ayay u hoosaysaa. Cudurka hivku maanta ma aha cudur dilaa ah ee waa cudur uu qofku sidayo oo infekshankiisa la daawayn karo. Haddii daawayntiisa la bilaabo wakhti fiican ama wakhti hore wuxuu markaa qofku filanayaa ama rajaynayaa inuu noolaado intii uu caadiyan noolaan lahaa isagoon cudurka hivka ah qabin.
Dad badan ayaa cudurka hivka ah iyagoo qabo ku nool wadanka Iswiidhan. Inuu qofku jaahil ka yahay in qofka cudurka hivka qabaa uu ku noolaan karo waxay keentaa takoorid. Sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay in aqoonta cudurka hivka kor loo qaado. Halkan waxaad ka oggaanaysaa waxyaabo badan oo ku saabsan micnaha in lagu noolaado cudurka hivka maanta. Waxa aanu annagu aaminsanahay inaad adigu ka heleyso aqoon badan micnaha ka dambeeya in cudurka hivka lagu noolaankaro maanta wadanka Iswiidhan.
Infekshanka hivka ama cudurka hivka la yiraahdo waxa sababa Fayrus waxana cudurka hivka loo soo gaabiyey magaca la yiraahdo (humant immunbristvirus) oo macnahiisu noqonayo faysriska dila difaaca jirka bini’aadanka. Hivka waxa la kala qaadikaraa marka la sameeyo galmada xaga hore siilka ama xaga bambe futada. Fayraska waxa xitaa kaloo la kala qaadikaraa haddii afka laysaga galmoodo taas oo aan lahayn waxa difaac ah, oo gaar ahaan shahwadu afkaaga taabato ama gudaha afka oo dhaawac leh oo nabar ku yaallo. Haddii aad adigu isticmaasho mukhaadaraad oo qof kale aad la qaybsato cirbada/irbada aad mukhaadaraadka ku isticmaalaysaan, markaa dhiiga ayaad ku kala qaadi kartaan oo fayruskii dhiiga ayuu la socdaa.
Marka ugu horreeysa ee hivka adiga lagugu daarto ama laguu soo gudbiyo wax dhibaato ah inta hore ma dareemaysid. Dadka qaarkood waxa xanuunta cunaha, qandho ama xumad ku dhacda, qanjidhada cunaha oo barara ama jirka oo wax ka soo baxaan. Astaamahaas waxaad isku arki kartaa qiyaastii hal ilaa afar asbuuc marka laga soo wareego wakhtigii lagugu daartay. Taas waxa la yiraahdaa oo loogu yeeraa infekshankii koowaad. Calaamadahaasi waxay u eekaan karaan sida hargebka oo kale kadibna waxay inta badan tagaan dhowr asbuuc kadib. Si kastaba ha ahaatee wuxuu infekshankii ku sii jirayaa jirka oo si aan la dareemayn ayuu difaacii jirka u sii daciifinayaa. Cudurka oo laysu gudbiyaa waxay khatartiisu badan tahay bilaha ugu horeeya marka cudurka lagugu daarto kadib. Tirada fiirusku markaa way badan tahay, intaanu difaaca jirku bilaabin inuu iska celiyo fiiruska, iyadoon loo eegayn astaamihii oo horumar kugu samaysa iyo inkale.
Ma jirto talaal kaa ilaalinahaya iyo daawo aad cudurka hivka kaga bogsanaysid toona. Hase ahaatee waxa jira daawooyin wax ku ool ah kuwaas oo joojinaya horumarka cudurka waxaanay daawooyinkaasi kugu samaynayaan in aanu difaaca jirkaaku kharribmin oo aanu burburin, haddii daawooyinka laguu bilaabo wakhti fiican. Sidaas ayaa lagu joojin karaa inuu cudurku difaaca jirku isku bedelo cudur xun oo ah eedhis (aids, ingiriiska wuxuu ku noqonayaa Acquired Immune Deficiency Syndrome).
Sidoo kale haddii ay daawayntii lagu daawaynayey si wanaagsan u shaqayso waxay keeni kartaa inay gudbintii aad cudurka qof kale u gudbin lahayd ay aad u hoosayso ama ay yaraato, markaa waxa si aad ah hoos ugu dhacaya tiradii fayruska dhiiga ku jirtay iyo dheecaamadii kaleba ee iyaguna jirka ku jiray. Laakiin waa in aanad qabin cuduro kale oo galmada laysugu gudbiyo. Sadaas daraadeed waa in aad marwalb galmada u isticmaasho bacda guska la gashado ama kondomka si aad u yaraysid khatarta faafinta cudurka iyo inaad iska ilaalisid cudurada hoosta ku dhacaba.
Maadaama aanay daawadu ahayn mid kaa baabi’inaysa ama aad cudurka kaga bogsanaysid waxa markaa khasab kugu ah in aad noloshaada oo dhan daawada qaadatid.
Dhammaan dumarka uurka leh oo dhan waa laga baaraa cudurka hivka, si wakhti hore daawooyinka loogu bilaabi karo, inta ay uurka leeyihiin si looga taxadaro marka laga foolinayo ama laga ummulinayo, waxa markaana la yaraynayaa inay hooyadu ilamaha ku daarato cudurka hivka. Maanta wadanka Iswiidhan waa dhif inay hooyo cudurka hivka qabtaa ay ilmaheeda u gudbiso fayruska intay uurka leedahay iyo markay ummulaysaba.
ISKA BAAR CUDURKA HIVKA
In aad is baartid waa sida keliya ee lagu ogaan karo in aad qabtid eydhis iyo in kale. Hadba sida degdeg loogu ogaado cudurka ayaa degdeg loogu billaabi karaa daweynta oo dhaawaca difaaca jirka loo yareyn karaa. Dacwad codsi megengelyo oo socota ma saameyneyso haddii baaritaanka lagu ogaan lahaa in aad qabtid eydhis. Qaabilaadda kuugu dhaw ka hel 1177.sewww.1177.se ama wac 0771-1177 91, furanyahay: 08:00-12.00, iyadoo la heliyo turjubaan Somaali ah.
waa bog internet ah ku saabsan warbixinta hivka
Ka qayb qaadasho Facebook Ka qayb qaadasho Twitter Warqad ahaan kula soo bax oo soo qoro
@Waa bog internet ah oo ku saabsan warbixinta hivka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habka macluumaadka loo bixinayo hivku halka uu maanta marayo, waxaad kala xiriiraysaa Hay’adda caafimaadka dadweynaha info@folkhalsomyndigheten.se